Ahoana no hatao - Ikkaro
firosoana >> Cómo hacer
Ny fomba DIY na anaovanao ny tenanao dia fomba fiainana iray.
Mamorona zavatra avy am-boalohany, ovao ary hack ny efa misy, ampiasao indray ary avereno jerena izy ireo amin'ny zavatra tsy mitovy amin'ny namoronana azy ireo ary tsy noeritreretinay ho azo ampiasaina.
Ny Ahoana no atao dia sary an-tsaina, famoronana, fahalianana madio.
Zahao ireo tutorial momba ny fomba fanaovana sy DIY
Ahoana ny fomba fanaovana sofa amin'ny paleta
Tamin'ity fahavaratra ity dia nanova sofa taloha efa niasa isika iray izay namboarinay tamin'ny palety. Ny marina dia tsy tetik'asako io, ny hevitra, ny faniriana ary ny asa dia napetraky ny vadiko. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanokana ny tenako hamindra ireo paleta avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray hafa aho ary hatory amin'ny torimaso rehefa tafangona.
Ny sofa paleta dia amin'ny lamaody. Manintona izy ireo, tsara tarehy, tena mora ny manangana ary mety amin'ny terraces sy zaridaina. Mateti-pitranga izy ireo ka mivarotra ny kitapo hampiakarana azy na ireo ondana mahazatra.
Nifidy ny fomba tsotra indrindra hanaovana izany izahay. Betsaka ny fiovana amin'ny sofa paleta, saingy tena tsotra sy tsotra izany.
Manana fizarana maromaro momba an'io lohahevitra io izahay DIY sy paleta y Fanaka misy paleta
Andao hojerentsika ny fomba hanaovana izany tsotra catapult ho an'ny ankizy vita amin'ny paompy akanjo sy hazo gilasy. Natao ho an'ny ankizy izy io. Mandany fotoana miaraka amin'izy ireo amin'ny fananganana azy ary avy eo milalao fandefasana karazana projectile.
Hararaotinay ny fotoana hanazavana ireo hevitra sy data samihafa momba ny catapult amin'ny tantara sy ny ady arakaraka ny taonan'ny zaza.
Drainer ho an'ny kapsily kafe
Ampianariko ianao hanao fantsona faran'izay tsotra nefa tena mandaitra ho an'ny kapsula kafe. Tsotra be ilay izy ka nanontany tena aho raha hanao tutorial na tsia, satria tsy tsikelikely izany fa dingana tokana. Fa tiako ireo vahaolana isan'andro izay azon'ny rehetra atao amin'ny zavatra isan'andro.
Fa ny mazava dia izay rehetra manana mpanao kafe kapsily, raha ny amiko ny Dolce Gusto, dia tsy afaka manary ny kapsily noho ny antony maro samihafa. Satria mandoto izahay ary satria manidina tsikelikely ary mitete avy ao aminao ny fako.
Raha mpamboly kafe ianao dia mety ho liana amin'ireo lahatsoratra 2 ireo momba ny fomba fanaovana roasters kafe
Roaster kafe misy milina fanasan-damba
Roaster an-trano misy vilany
Fetsy sy hacks haka sary
Hitako ny tenako a Lahatsary mamitaka sary an'i Cooph ary misintona ny kofehiko no anaovako famandrihana ny fantsona Youtube anao ary talanjona amin'ny fahatsoran'ny hafetsena ampiasainy sy ny valiny azo.
Ny zavatra ampianariny antsika dia ny mahazo vokatra mahavariana sahy manandrana zava-baovao ary misy eritreritra. Na dia mazava ho azy aza, amin'ny farany dia azoko an-tsaina fa ny valiny azo amin'ny fampiharana ireo tetika mitovy amin'ny ampiasain'ny matihanina sy ny mpankafy iray dia ho tsy mendrika. Heveriko fa ity dia hanome lisitr'ireo «andrasana / zava-misy» izay tianay tokoa ny hahita
Ary manararaotra manangona ny anay rehetra izahay Tutorials DIY ao amin'ilay fizarana mitovy amin'ny lahatsoratra 4 an'ny DIY Photography, saingy efa manana tetika vitsivitsy hafa ao amin'ilay lisitra izahay.
Ahoana ny fomba hanaovana dehumidifier an-trano
Homemade tsotra, tsy misy elektronika na mekanisma. Andao hanao dehumidifier hisambotra hamandoana avy amin'ny efi-tranontsika, ny efitranontsika na amin'izay toerana tadiavintsika.
Azontsika atao ny miresaka karazana dehumidifier 2:
Desiccants mampiasa gel silica
Miaraka amin'ny compressor sy condenser
Miresaka fomba iray amin'ny hamandoana kely isika, mety tsara ho an'ny lalimoara sy toerana mihidy.
Tsy fanafody maharitra io fa manampy antsika hanana tontolo maina kokoa.
Ho an'ny toerana kely, ao anaty kaontenera
Tsy haiko raha fantatrao izany, fa ny fivarotana fitaovana sy fivarotana avo lenta kosa mivarotra boaty plastika izay mifoka hamandoana.
Ahoana ny fomba hanaovana mug labiera Viking anao manokana
Cervercero ve ianao? Eny, tsy mety tsy hita ao an-tranonao izany. Ary raha tsy izany ianao, dia io no fanomezana mety indrindra, vita amin'ny tananao ... Andao hojerentsika ny fomba fanaovana mug labiera Viking.
Ny "Viking" no lazain'ny tutorial fa tsy nanamarina aho fa nanao toy izany ny Vikings. Saingy raisinay ny fahazoan-dàlana satria DIY tena tsara dia tsara tsy ampiasana Instructables.
Ny siny dia vita amin'ny hazo hazo ary miaraka amina fitaovana fototra, famaky ary antsy. Ny hazo voafantina dia ny elderberry. Rehefa misafidy hazo dia zava-dehibe ny mandinika ny voam-bary sy ny voan-kazo. Ka tsy hazo knotty izy io fa voa tsara ary miaraka amin'ny lalan-drà mifanitsy aminy, izay hanamora kokoa ny fanapahana.
Fomba fanasana zaza namafa
Raha ray aman-dreny ianao dia hampiasa ilay mamafa ny zaza ary iray amin'ireo zavatra ireo satria hatramin'ny andrana dia fantatrao fa hanohy hampiasa azy ireo mandrakizay ianao.
Mitondra tutorial aho ny fomba fanaovana solo-lena, izay azontsika ampiasaina tsara amin'ny zazantsika na amin'ny fampiasana an-trano. DIY an'ny «caserotes».
Ny famafazana azontsika dia mora vidy, na dia sarotra aza ny manolo ny varotra amin'ireto, dia marina fa raha lany ianao ary nakatona ireo fivarotana na lasa nanao dia lavitra ianao na manana karazana ny tsy fandeferana amin'ny zavatra simika hita amin'ny famafana ara-barotra, avy eo ity fampianarana ity dia mety ho mora ampiasaina aminao.
Ahoana ny fanaovana nomerika boky
Ho hitantsika eo ahoana ny fanaovana nomerika boky amin'ny fomba haingana sy vita an-trano.
Ny fandikana boky dia misy ampahany 2 foana, ny voalohany izay ahitanao ny sarin'ny lahatsoratra ary ny faharoa izay itondrana ity sary ity amin'ny OCR, un Rindrambaiko Famantaran-toetra Optical
Araka ny fomban-drazana, ny boky dia nojerena isaky ny pejy, ity dia dingana miadana be izay be pitsiny noho ny hazondamosin'ireo boky, izay miolaka ireo pejy ary avy eo ny OCR dia tsy nahafantatra tsara ny teny. ntat fa olona maro no mamehy azy ireo mba hanamorana ny fizotry ny fizahana.
Fomba fanamboarana goba Ruby 2 × 2 miaraka amin'ny dice
Manontany ahy amin'ny alàlan'ny mailaka izy ireo fananganana goba Rubik ho an'ny kilasy ankizy 10-11 taona.
Raha mitady vahaolana sahaza azy ireo aho dia avelako ho anao ity cAhoana ny fomba hanamboarana vatokely 2 × 2 Rubik amin'ny dadu.
Mampalahelo fa tsy mendrika azy ireo izany satria lafo loatra ny vahaolana, ary tsy maintsy mampiasa fitaovana tsy mifanaraka amin'ny taonany, fa angamba mety aminao io.
Ho anao izay efa ela no nanaraka ny bilaogy, a vatokely rubik's magnetika mitovy fa 3 × 3
Toy ny amin'ity tranga ity dia tsy misy afa-tsy 8 dice, tsy manana afovoany azontsika ampiasaina ho pivot ho an'ny hafa rehetra isika, koa ny ataontsika dia ny mampiditra baolina vy izay hiasa ho toy ny baolina mitambatra mba hampahazava ny fihetsiky ny ny dice.
Ahoana ny fomba hanaovana fandrika moka
Fotoam-pahavaratra ary tsy manome fialan-tsasatra ho antsika ny moka. Ho hitantsika eo ny fomba fanaovana fandrika moka vita an-trano tena tsotra ny manamboatra ary tena mora vidy amin'ny tavoahangy plastika sy baody miorina CO2
tsara, andrana ity. Ny tena marina dia omaly aho no namitaka ary tsy hijery ny valiny raha tsy ny alahady satria tsy haiko na mandeha na tsia. Araho hatrany fa hanovako ny fidirana amin'ny valiny azoko.
Ny fandrika dia tokony hiorina amin'ny ny moka dia manintona ny CO2 omen'ny olonaNoho izany, miaraka amin'ny fangaro ny siramamy volontsôkôly voarà anaty rano sy masirasira, dia betsaka ny CO2 no vokarina, izay manintona kokoa azy.
pejy1 pejy2 ... pejy11 manaraka →